5 Best Places kudya Ice Cream In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Places kudya Ice Cream In Europe
(Last Updated On: 19/03/2021)
Vakanguva rombo zvakakwana kunoona Europe vanoziva kufara uye nepfungwa uchinzvera kuti rinopa. Kuenda mu Europe kunogona kupfumisa upenyu hwako vakawanda nzira. From mitauro, naka zvinotyisa, uye nhoroondo kune tarenda chikafu kuti haugoni kuwana kumba. Avo vane imwe inotapira zino aizikirimu unogona kuwana chinhu chinoshamisa. Various aizikirimu parlors Europe yose kupa kuwedzera naka siyana. Shure kwezvose, aizikirimu ndiyo nzira yakarurama kugara shure mumumvuri uye kuzorora pashure rimwe zuva refu yekunyatsonzwisisa guta. Kana uri achipfuura Europe uye ndiwo aizikirimu anoda, takatora huru ruzivo chedu achipfuura Europe uye akaisa pamwe mazita kwamuri. saka, pano zvimwe yakanakisisa nzvimbo kudya aizikirimu mu Europe.
Where kudya Ice Cream In Italy?
Italy ndiyo inozivikanwa ayo kuda upenyu uye zvinonaka chikafu. Dzavo aizikirimu inoita nokubatanidza maviri. Vakawanda vanoda aizikirimu vanobvuma kuti hamuna wakararama kusvikira makaravira munhu Scoop hwechokwadi Italian gelato. Mufumi munuhwi uye magadzirirwo tiri zviratidzo zvakajeka kuti aizikirimu kwakaitwa munhu kuti vaneshungu pamusoro basa ravo. Ndizvo kana uri rombo zvakakwana naJessica yakanaka aizikirimu nzvimbo.
Roma ndiyo musha mumwe yakanakisisa aizikirimu parlors mu Europe, sezvo Milk. Guta rizere vanoda aizikirimu. Wakajeka mifananidzo yevanhu vachinakidzwa gelato anowanzoramba. zvisinei, mune rimwe guta rine zvisingaverengeki gelato zvitoro, mumwe anomira senzira yakavanzika chiwanikwa kuti chero anoda gelato anoda kushanyira. Asingaverengeki revashanyi veko anodirana Chichauya Il plagjiati. Chii chinogona kuita kuti avo aizikirimu saka nemamwe ungabvunza? Chekutanga, vanhu vazhinji vanowana vapfumi uye richinaka siyana vavanopisira. Vanogadzirira gelato zvavo zvezuva nezuva uye kushandisa rwokuzvarwa zvinhu. Zvavo chando mumakenduru vakapfuma uye creamy, sezvo zita rinoratidza. Kana uri kushamisika chii Uyai Il plagjiati zvinoreva, uchafara kuzviziva anoshandura kuti “Like Milk”. Kunyangwe vanhu vanovenga mukaka vanogona kunakidzwa nemavara avo asina mukaka. The manakiro zvinoshamisa. chepiri, vanhu rumbidza zviri kuitika chitoro. It chinayo musimboti uye aone Roma.
Where kudya Ice Cream In Germany?
Inonakidza ice cream hachisi chinhu chinoshamwaridzana nevazhinji neGerman. zvisinei, Ballabeni Aizi kirimu ari pano kushandura kuti wayo incredible scoops. Iyi yakatanhamara ice cream parlor ice iri iri muMunich uye ine zvakanyanyisa zvinotevera. Yokumusoro ndekwaJehovha Giorgio Ballabeni, mumwe grandmaster mu unyanzvi rokuita aizikirimu. Akatanga aizikirimu somunhu chitandadzo, uye zvose reMunich anotenda nokuti. vashanyi vakawanda veko rudo muchitoro, ndokusiya incredible wongororo. Kana ukaedza zvavo aizikirimu, hazvina kuoma kuona nei. Vakaita honed basa ravo vakakwana uye tiri mumwe dzakanakisisa mumunda yavo. hasha dzavo anouya kuburikidza zvose Scoop. Rimwezve bhonasi ndechokuti vane zvavo aizikirimu rori uye anogona tigutse zvido voga kumapati!
Where kudya Ice Cream In Hungary?
Unofanira munombosangana uri guru Hungary, nechokwadi kushanyira Gelarto Rosa. Izvi zvinoshamisa aizikirimu chitoro chiri moyo Budapest. Vose vari nezvechivanhu, kudyidzana, rudo, uye chido, riri kuoneka pabasa ravo. Nemamwe mashoko, vari nyanzvi vechokwadi mumunda. Kusvikira avo aizikirimu, uchafara kunzwa kuti vanoshandisa chete eitsvo Organic pakugadzira. Dzose huru aizikirimu chitoro haambotauri chakagadzirwa aizikirimu. zvisinei, chii chinoita Gelarto Rosa nedzimwe mhizha dzavo nzira kuumba aizikirimu kupinda ruva. Kana uri nokusingaperi Szent Istvan Square kuchipisa zuva, iwe uchave nechokwadi chekuona vanhu vazhinji vane maruva-akafanana echando makirimu vanofamba-famba.
Inotevera inofanirwa-kushanyira ice cream parlor inobva kuZurich. vakakwira ane aizikirimu yokumusoro kuti akawana rakafemerwa kubva Argentina. Muvambi Rofe Bote akararama ikoko emakore maviri uye akatora vari mutsika. Akanga vakashamiswa fruity yavo, rinozorodza, dzinongoitika aizikirimu. Akanga mwoyo zvokuti akavaisa Switzerland. Nhasi pane zvitoro mbiri Zurich, uye ivo kuvimbisa avo Argentinian midzi. The yainakidza mumhanzi uye Latin vanonzwa zviri chokwadi kusimudza mweya yenyu kunyanya sezvo iwe zvimwe zvinonaka aizikirimu. Hasta ndiyo rakanakisisa musanganiswa Argentinian siyana uye Swiss unyanzvi.
The French vari inozivikanwa zvinhu zvakawanda. Chekutanga, pane rudo rwavo nokuda hwemashiripiti, akitekicha, uye uzivi, iyo hazvirambiki. Paris ndiye testamendi mupenyu kuti. chepiri, vari ichinyatsozivikanwa zvavo zvinoshamisa pakubika. French dzekubikira ndezvimwe zvezvisarudzo zvikuru yavose sezvavakatarirwa munyika, uye unogona kuva nechokwadi chokuti kurangwa mukicheni rinoratidza mumagwenga dzavo. Nokuda chido ichi zvokudya, hazvishamisi kuti vane zvimwe zvakanaka echando mumakenduru mu Europe.
Chimwe chezvinhu dzakakurumbira wevakarurama ndiko Berthillon. Uyu ndiwo mumwe yakakurumbira parlors muParis uye nokuda kwechikonzero chakanaka. Chakazarurwa ari 60s uye akanga achishumira zvinonaka aizikirimu kubvira. Wakasununguka kusarudza mumwe wavo richinaka siyana, uye anogona kunyange kusanganisa uye kunowirirana siyana kuwana zvakanaka anofambidzana iwe.
Pose ukasarudza kuenda, wava nechokwadi kuti vanakidzwe Scoop of aizikirimu zvakanaka. Just yeuka kugara kumashure uye vanofarira girl kunaka kana ukadaro. Tora zvose uye ufungisise dzinoshamisa siyana pamusoro aizikirimu munzvimbo idzi siyana.
Ready kuwana vanofarira uye siyana kuti Europe ine kupa? Book Your Train Tickets ikozvino. Mushure maizvozvo, unogona kuwana inonaka nyika ice cream mu Europe.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best Places kudya Ice Cream In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#cooldown #aizi kirimu #traveleurope eurotrip Foodie